Duqa Muqdisho oo Maanta La Kulmay Ergeyga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya -Sawirro
Tuesday October 08, 2019 - 18:08:53 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta kulan la qaatay shir Ergayga Gaarka ee Qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mr James Swan.
Guddoomiye Cumar ayaa kala hadlay Mr Swan arrimo ay ka mid ahaayeen xoojinta amniga caasimadda iyo taageerada Qaramada midoobay ee Xaqiijinta nabadgelyada.
Waxa ay sidoo kale diiradda isla wada saareen dardargalinta arrimaha hormarinta sida dhismaha Wadooyinka, Kobcinta Dhaqaalaha, Shaqo abuurka dhalinyarada iyo xal u helista arrimaha Barakaca Caasimadda.
Mr Swan ayaa dhankiisa Balan qaaday in ay xoojin doonaan Wadashaqaynta Tooska ah oo ay la leeyihiin Maamulka Gobolka sidoo kalan ay kaalin taageero la garab taagnaan doonto Gobolka Banaadir.
Kulanka waxaa Gudoomiyaha ku wehliyey Xoghayaha guud ee Maamulka Gobolka Banaadir iyo saraakiil ka tirsan Gobolka.
24-kii July ayay aheyd markii Wakiilka Qaramada Midoobey Mr Swan oo booqday xarunta Dowladda Hoose uu ku soo dhoweeyay Duqii hore ee Muqdisho Allaha u naxariistee Eng. Yariisow, iyadoo saacado kaddib booqashadiis uu xarunta gobolka ka dhacay qaraxii sababay dhimashada Guddoomiyeyaal iyo Agaasimayaal, waxaana todobaad kaddib uu Eng Yariisow u geeriyooday dhaawicii ka soo gaaray qaraxaas.